Xarakada al-Shabaab oo Albaabada u laabay Xafiisyo Hay adeed oo ku yaala Baladweyne – SBC
Xarakada al-Shabaab oo Albaabada u laabay Xafiisyo Hay adeed oo ku yaala Baladweyne
Wararka ka imaanaya magaalada Baledweyn ee xarunta Gobolka hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in Xarakada al shabaab ay la wareegeen xaruntii hay’ada DRC ay ku lahad baledweyne hay’ada Danish Refugee Council (DRC) magaalada baledweyn ayaa waxaa gudaha u galay Rag hubaysan oo la wareegay xafiisyadii hay’ada ku lahayd
Qaar ka mid ah shaqaallaha hay’adda oo markiiba aynu la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in alaabada leysugu dhuftay xarunta hay’adda DRC ee magaalada Beledweyne
”Ciidan wajiyada duuban ayaa inoo soo galay anaga oo howlmaalmeedkeeni caadiga ahaa isaga jirna, waxaa ay inoo sheegeen in aan u soo baneyno xafiiska iyo guud ahaanba xarunta hay’adda DRC”, ayuu yiri’, mid ka mid ah shaqaallaha xarunta oo la hadlay Xafiiska SBC International ee Garoowe.
Wararka ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay ay xarkada Ashabaab al mujaahidiin ay galeen xarumihii ay magaalada baledweyn ay ku la haayeen Hay’adaha :World Health Organisation (WHO) iyo Cooperazione Internazionale (COOPI)ee magaalada Baledweyne.
Sidoo kale, waxaa hay’adaha lagu eedeeyay inay wakiillo u yihiin kaniisado, ayna gudbiyaan warar ka dhan ah muslimiinta, gaar ahaan mujaahidiinta. Iyagoo sheegay inay caawiyaan kuwa doonaya inay burburiyaan ismaamulka shareecada Islaamka sida ay hadalka u dhigeen xarakada Ashabaab mar ay ka hadlayeen eedeeymo ay hay’adahaasi ay shaqada joojiyeen ay ka hadlayeen .
Talaabada ay shaqada kaga hakiyeen Xoogaga Alshabaabul mujaahidiin ee hay’adaha ayaa waxaa ay saamayn ku yeelanaysa dadka Danyartaha ee ku tiirsanaa gargaarkaBani’aadnimo oo ay hay’adahaasi kafulijireen deegaanada laga xanibay maanta .
Arintaan shaqada laga xanibay hay’adaha samafalayaasha ah ayaa waxaa ay ku soo beegmaysaa xili mudooyinkiin ugudambaysay ay hay’adahaasi ay Bixinayeen howllogargaar ah kuwaas oo ay u qeybinayeen dad iyagu ku tabaaleynaa magaalada Baladweyne sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo ka mid ah dadka Tabaaleysan.
Ma ahan markii ugu horreysay oo Xarakada Shabaab Almujaahidiin ay shaqooyinkii ka joojisay hay’ado gargaar oo ka howlgala gobollada ay ka taliso sannadkii 2010 ay shaqooyinkii ka joojisay in ka badan 10-hay’adood oo ay ku jiraan kuwa Qarammada Midoobay.
Cabdi Casiis Ibraahim Axmed (Cabdi Casiis Okey)